कहाँ बाट आए शनि ता,,माङ ? जस्ले काठमाण्डौमा घटाए डर,,ला,,ग्दो घ,,टना ! – Dainik Sangalo
कहाँ बाट आए शनि तामाङ ? जस्ले काठमाण्डौमा घटाए डर लाग्दो घ टना !
प्रहरी र अर्काे एक सर्वसाधारणलाई खु’ कु’ री प्र’ हा’ र ग’र्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले प क्रा उ गरेको छ । प क्रा उ पर्नेमा रामेछापको मन्थली लिखु घर भई हाल जरङ्खु बस्ने वर्ष २९ को शनि तामाङ रहेका छन् ।
काठमाडौँ तार्केश्वर नगरपालिका–८ शेषमतीस्थित लामवजार नजिक सामान्य विषयमा झ’ ग’ डा हुँ’दा उनले सोही ठाउँका २९ वर्षीय सुवास तामाङलाई खु’ कु ‘री’ले टा ‘उ’को र घाँ’ टी को प’ छा’ डि ‘बाट प्र’ ह’ र ग’रि घा’इ’ते बनाएका थिए ।
यस्तै मकवानपुरमा बेग्लाबेग्लै स्थानमा एक पुरुष र दुई महिलाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । फरक–फरक स्थानमा दुई महिला झु ‘ण्डि’ एको अवस्थामा फेला परेका छन् भने मृत अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–५ सिँचाइ टोलमा वस्ने १८ वर्षीया आरती घिमिरे कोठामा र मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ वस्ने ४२ वर्षीया सुनमाया रुम्वा गोलेको शव घर नजिकै रुखमा झु’ ण्डि’ एको अवस्था फेला परेको जिल्लाका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकरी दिनुभयो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यही पुस ३ गतेदेखि तदर्थ समिति नै अवैध भएको कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारले २०७७ साउन १२ गते रेडक्रसको तत्कालीन कार्य समिति भङ्ग गरी नेत्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।
कोभिडका कारण तीन महिनामा अधिवेशन गर्न सकिएन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएको समय उच्च अदालत पाटनले थप गरेकामा त्यो पनि पुस ३ गते सकिएको कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।